Teknika | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Manampy amin'ny famaritana ny fametahana ny fahitalavitra Samsung?
Manampy amin'ny famaritana ny fanamarihana ny fahitalavitra Samsung? Raha vao jerena, ny anaran'ireo fahitalavitra Samsung dia mampatahotra tsotra izao miaraka amina litera sy tarehimarika marobe, izay toa voalamina tsy milahatra manokana. Raha ny marina dia afaka mahita zavatra amin'ny litera vitsivitsy ianao, ...
Ahoana ny fanaraha-maso ny lakozia elektronika ho an'ny marina?
Ahoana ny fomba hijerena ny refy an-dakozia elektronika raha marina ao an-trano? any amin'ny farmasia dia misy mizana sy lanjany marina, mazava ho azy. midira ary mangataha lanja mandritra ny roa minitra, miaraka aminao ny mizana mba ...
fiovan'ny toetr'andro? Inona ny fiovan'ny dingana? antony ho an'ny fanovana?
dingana fiovana? inona ny fiovan'ny dingana? antony nahatonga ilay fiovana? amin'ny fomba tsotra: ny antony mahatonga ny fiovana dia ny fisian'ny singa mihetsika ao amin'ny faritra, satria mirona hanangona sy hanome herinaratra na ...
Inona no fitsipika arahin'ny motera voromby Schauberger
Inona ny fitsipiky ny fiasan'ny maotera vortex Schauberger amin'ny famoronana vortex manana endrika manokana, izay donut, izay mihazakazaka mankany amin'ny afovoany sy manodidina ny foibe afovoan'ilay donut. Fa ...
Mampidi-doza ve ny mitaona ny finday amin'ny famenoana fiara lehibe?
Tsy manimba ve ny famenoana finday amin'ny charger misy amperage lehibe? Manimba, mety ho may ny seho (tsy eo noho eo, fa miadana). Amin'ny ankapobeny, dia ho tonga amin'ny teboka saika tsy misy hita maso amin'ny fampiratiana, dia izay ...
Ahoana no handrefesana ny indostrian'ny fanodinana
Ahoana ny fandrefesana ny inductance ny coil Tsy hiasa maimaimpoana izy. Ny asa fandrefesana inductance dia tsy asa mora ary tsy azo vahana amin'ny DC multimeter irery. Azo atao ny manatona maromaro. Ny zavatra voalohany aloha, inductance ...
Mampiasa ny fahitalavitra DCF-77 ve ny mozika any Moskoa?
Ny signal radio radio DCF-77 ve dia miasa ao Moskoa Ny mpandefa DCF77 dia any Mainflingen, Alemana (25 km atsimo atsinanan'ny Frankfurt am Main) ary miasa amin'ny hatetika 77,5 kHz miaraka amin'ny herin'ny ...
Inona ity chip ity ??? Inona no atao hoe ???? HEF4094BP
inona ity microcircuit ity ??? inona no iantsoana azy ???? HEF4094BP http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/17726/PHILIPS/HEF4069UBP.html rohy nosakanan'ny fanapahan-kevitry ny fitantanana ny tetikasa Code converter HEF4094BP analogue Rosiana KR1561PR1 Digital converter microrocircuit converter Eight-bit shift register miaraka amin'ny fidirana serial, ...
Iza no mahalala ny fomba fananganana ny lakandranon'i PHILIPS TV efa tranainy, izay tsy misy zavatra ao amin'ny fanaraha-maso an-tariby sy ny fahitalavitra?
Iza no mahay manamboatra fantsom-pahitalavitra amin'ny fahitalavitra PHILIPS taloha, izay tsy misy zavatra toy izany ao amin'ny menu lavitra sy fahitalavitra? ny zava-drehetra dia ao anaty menio, fa ny "setting channel" tsy ...
Ahoana no ahafantarana ny milevina amin'ny kamera? Nikon D3100
Ahoana no hahitana hoe inona ny kilometatra fakantsary an'ny fakantsary? Nikon D3100 faktiora mileage tsy ny ratsy indrindra! Nahita INONA aho sy ny fomba famalian'ny ankizy amin'ny fanadinana any am-pianarana, ary ...
Mba lazao ahy azafady hoe ahoana ny fomba famoretana ny solika? Ny Amerikanina dia antsoina koa hoe ampondra mamely ny lohany
Azafady mba lazao amiko ny fomba fandaminana sy ny fiasan'ny paompy solika? Antsoin'ny Amerikanina hoe boriky mihozongozona ny lohany ao anaty lavadrano izy io ary misy zavatra toy ny piston izay misy valizy fanamarinana amin'ny voalohany ...
Mitady boky toy ny "électriciel for dummies" aho
Mitady boky misy ny karazana "électriciel ho an'ny dummies" Misy magazine maimaim-poana amin'ny internet "IZAKO IZAY ELIKA" !!! Rudolf Svoren "Elektronika tsikelikely". Taona 1986. Izy tenany tsy nanomboka tamin'ny fahatanorana. Betsaka amin'ity boky ity ...
Inona avy ireo andraikitr'i AF sy TA? inona ireo anjara asan'ny radio: AF sy TA? inona no ataon'izy ireo?
inona ny fiasan'ny AF sy TA? inona avy ireo fiasa amin'ny radio: AF sy TA? manao inona ry zareo? AF. Lisitry ny zana-kazo solo-jotra Misy ny lisitr'ireo zana-kazo solo-jotra miseho amin'ny fampisehoana ...
Ahoana ny fomba hametahana ny môtera amin'ny metatra megohm?
ahoana ny fanenomana ny motera amin'ny megohmmeter? Ny megohmmeter no fomba azo itokisana indrindra. mampifandray ny fifandraisana iray amin'ny megohmmeter amin'ny trano misy motera ianao, ary ny faharoa mankany amin'ny terminal mihodina ary ahodinkodina azy, arakaraka ny haingana no tsara kokoa. ok rehefa ny zana-tsipìka ...
izay nanamboatra ny jirony
iza no namorona ny jiro ilay nanao patanty taloha. amin'ny ankapobeny, ny jiro voalohany sy bateria iray dia noforonina tany Babylonia tamin'ny andro taloha ... Ireny forona fantatsika ireny dia plagiarisme siantifika fotsiny! ...
DVD mpijery dia tsy mamaky ny USB flash drive
Ny mpamaky DVD tsy mamaky USB stick. Fantatro. Inona ny rafitry ny rakitra flash drive? Vao tsy ela akory izay, NTFS sy FAT32 no nampiasaina. Azoko antoka kokoa - mampiasa NTFS ianao izao. ...
Inona no tsara kokoa: ranom-boasary, tavy na solika?
Iza no tsara kokoa: rosin, tavy solida na asidra? Mampiasa orthofosorika aho, anontanio tsara. Inona no hataonao solder? Mitsikia, tsy hampianatra anao zava-dratsy izy ireo. Raha tsy te hifikitra amin'ny vy ny tinitra dia tsaboina amin'ny asidra. SY ...
Firy ny MEGABITS ao anatin'ny MEGABIT iray…. mila antoka ..
Firy ny MEGABITS ao anatin'ny MEGABIT iray…. ilainao tsara .. ny mpifanila vodirindrina, ny megabit dia singa iray handrefesana ny habetsaky ny fampahalalana, ary koa ny megabyte, ary ny hafainganam-pandrefesana dia refesina amin'ny megabits / s na megabytes / s, ny ankehitriny ao anaty resaka "isan-tsegondra" ...
Inona no atao hoe rotor? Inona no atao hoe stator? Ao ambadiky ny sisiny
Inona no atao hoe rotor? Inona no atao hoe stator? Amin'ny fivezivezena mandeha mihetsika ROTO-fihodinana, fihodinana. Ny stator dia mijanona, mijanona, tsy mihetsika. Amin'ny milina elektrika dia mety samy manana fiolahana izy roa. Wikipedia. Motera DC. ...
Ahoana no atao amin'ny jiro ultraviolet sy infrarôra?
Ahoana no fomba hanaovana jiro ultraviolet sy infrared ao an-trano? DRL Fonosina lamba famaohana ary vaky ny jiro ivelany amin'ny jiro (TANDREMO NY FANDAHARANA!) Ny ao anaty ny jiro dia "mpandoro quartz", loharanon'ny taratra ultraviolet. Mifandray amin'ny fampiasana ...
81 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,953.